बाइकको क्लच प्लेट जोगाउन गियरमा रोकेर एक्सिलेटर नबटार्नुहोस् – Jaljala Online
यातायातका साधनमध्ये नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आएको साधन मोटरसाइल हो । यातायातको सेवा पुगेका र सडक सञ्जालले घेरिएका ठाउँका लागि बाइक सामान्य जस्तै पनि भएको छ । हिमाल, पहाड तथा तराई सबै क्षेत्रमा सहज रुपमा सञ्चालन हुने भएकाले पनि यसको प्रयोग बढ्दो अवस्थामा छ ।
यसरी सबैले प्रयोग गर्ने बाइकमा आउने समस्याका बारेमा जानकारी राख्न अब जरुरी छ । बाइक चलाउँदा बाइकको रेखदेख कसरी गर्ने भन्ने ध्यान दिन जरुरी छ । आज हामी बाइकको क्लचप्लेट कसरी सुरक्षा गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरौं :-
सवारी साधनमा प्रयोग हुने क्लच निकै महंगो मध्यको एक पाट्स हो । क्लच प्लेटको मूख्य काम इन्जिन र पाड्ग्राबीचको सम्बन्ध जोड्ने तथा फुकाउने हो ।
सामान्यतया मोटरसाइकलमा क्लच प्लेटको धेरै समस्या आइरहेको हुने गर्छ । हेवी ट्राफिकमा धेरै चलउनु पर्दा क्लज प्लेट धेरै बिग्रने गर्छ । जति धेरै क्लचको प्रयोग गर्यो त्यतिनै क्लचमा समस्या आउने हो ।
यसरी बचाउने क्लचप्लेट
सबैभन्दा पहिला क्लचको लिभर सहि स्थानमा हुनु पर्छ । सबभन्दा टुप्पोमा अथवा ह्याण्डल बारको नजिक हुनु हुँदैन ।
सुत्ने पोजिसनबाटै थाहा हुन्छ स्वभाव, पढ़नुहोस
राति ओच्छ्यानमा तपाईं कसरी सुत्नुहुन्छ भन्ने कुराले तपाईंको व्यक्तित्वको रहस्य खोलिदिन्छ । स्कटल्यान्डको एडिनबरामा रहेको स्लीप सेन्टरका निर्देशक क्रिस इडजीकोव्स्कीका अनुसार तपाईंले सुत्ने तरिकाले तपाईंको व्यक्तित्वका बारेमा बताउँछ । त्यस्तै, शारीरिक भाषाविज्ञ रोबर्ट फिप्सले पनि सुत्ने पोजिसनबाट व्यक्तित्व र जीवनप्रतिको दृष्टिकोण थाहा लाग्ने बताउँछन् । यसबाट तपाईंको दिन कति तनावपूर्ण थियो, तपाईं कति चिन्तित हुनुुहुन्थ्यो […]
कुनै पनि महिला मन परेकाे छ र उनलाई प्रपोज छ भने पहिले उनलाई कस्ता पुरुष मनपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ । त्यसबारे यहाँ जानकारी दिइएकाे छ । १. आफ्नै तारिफ गर्ने पुरुष महिला यस्ता पुरुषलाई फिटिक्कै मन पराउँदैनन् । आफ्नै तारिफ गर्ने पुरुषबाट महिला टाढा भाग्छन् । २. फ्लर्ट गर्ने पुरुष पुरुषमा फ्लर्ट गर्ने बानी […]